Dagaalka Galmudug iyo Puntland oo xoogeystay, Gaadiid dagaal iyo Ciidamo hor leh ku biiray +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dagaalka Galmudug iyo Puntland oo xoogeystay, Gaadiid dagaal iyo Ciidamo hor leh ku biiray +Cod
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in uu ii xoogeestay dagaalkii u dhaxeeyay Ciidamada Maamulka Galmudug iyo kuwa Puntlnad ee saakay mar kale dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo.
Dagaalka ayaa lasoo sheegayaa in uu yahay mid aad u culus oo la is dhaafsanayo hubka culus gaar ahaan madaafiicda goobta, waxaana si xoogan looga maqlayaa magaalada Gaalkacyo daryanka hubka culus ee la is dhaafsanayo.
Sida wararka ku heleyno dagaalka kasocda magaalada Gaalkacyo ayaa ah mid ka duwan kuwii hore, waxa uuna yahay dagaalka mid ka culus kuwii ka dhacayaya magaaladaasi maalmihii lasoo dhaafay.
Jiidaha hore ee dagaalka waxaa kusii qul qulaya ciidamo badan iyo Gaadiid Dagaal oo gurmad ah oo kala gaaraya labada ciidan ee dagaalama, xaalada magaalada Gaalkacyo ayaana ah mid dagaal oo aad u kacsan xiligan.
Wali lama oga qasaaraha ka dhashay dagaalka xoogan ee ka socda magaalada Gaalkacyo iyo hubka culus ee la is dhaafsanayo, waxaana inta badan ka barakacay goobaha dagaalka dadkii shacabka ahaa ee halkaasi ku dhaqnaa.